sprint inogona kutanga kupa yemahara hulu sevhisi kune vatengi vasina muganho
Kuru Nhau & Ongororo Sprint inogona kutanga kupa yemahara Hulu sevhisi kune vasingagumi vatengi
Sprint inogona kutanga kupa yemahara Hulu sevhisi kune vasingagumi vatengi
Zvinotaridza sekuti Sprint inoronga kutora T-Mobile uye AT & T nechipo chakakosha chevatengi vayo. Mushure mekunge vatakuri vaviri vazivisa vatengi vavo vasina muganho vaizowana yemahara Netflix uye HBO , zvichiteerana, Sprint ikozvino ine marongero akafanana nezve kupihwa kwemahara yekufambisa sevhisi kune vatengi.
Zvinoenderana nechinyorwa chemukati kubvaWave7 Ongororo, Hulu yekufambisa sevhisi ichagoverwa mahara neSprint kune vese vatengi vasina muganho.
Sprint iri kuronga kuisa maTV kubva kuHulu nezvirongwa zvaro zvisina muganho. Vatengesi vakaudzwa kuti izvi & lsquo; kuuya munguva pfupi. & Rsquo; Kuchave nekunyoresa kumwe chete paakaundi uye ichatsanangurwa seye $ 7.99 kukosha.
Kana ruzivo rwacho rwuri rwechokwadi, Sprint vatengi vasina muganho vachakurumidza kuwana mukana weHulu & apos; s limited-ads tier, iyo inopa raibhurari yekushambadzira yemamuvhi nemitambo yeTV, pamwe chete nezvirimo zvepakutanga. Kukwidziridzwa uko Sprint inofanirwa kutanga munguva pfupi hakuzosanganisi HBO, Showtime, Cinemax uye & ldquo; hapana bhizimusi & rdquo; service, iyo ichauya sekuwedzera-ons.
htc imwe m8 mutengo muUSA
curl tora chikumbiro nemaparameter
OnePlus 3 4G LTE mabhendi anotsigira: hezvino vatakuri vachashanda paUnited States
Iyi ndiyo Verizon & apos; Moto G5 Plus
Motorola DROID Turbo 2 uye Maxx 2 mitengo uye zuva rekuburitsa paVerizon
Wakanakisa mutakuri weUS? Iyi Verizon vs AT&T vs T-Mobile vs Sprint kufukidza mepu GIF inotaurira zvese
Apple iPhone SE 2020 mutengo, zuva rekuburitsa, uye specs
Yakanakisa kurwa mitambo ye iPhone yako kana Android muna 2020
Fitbit Sense uye Versa 3 inogadziridza inowedzera SpO2 mazinga, inonzwika mhinduro dzeGoogle
Maitiro Ekuwedzera Cucumber Rukoko pamusoro peZVIMWE-yakasimbiswa API Miedzo